Uche nke onye Dutch na-anwụ anwụ: ike na-adịghị ike: Martin Vrijland
Echiche nke nkezi Dutchman anwụwo: ike na-agafe
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 July 2019	• 11 Comments
Ọ bụrụ na isiokwu nke isiokwu a kpaliri gị ị gụọ ọdịnaya ahụ, nke ahụ apụtaghị nà gị onwe gị bụ onye na-adịghị ike ma na-agafe. O nwekwara ike ịbụ na ị kwenyere na aha ahụ ma ọ bụ na ị chọrọ ịma. Ma ka anyi mee ihe n'eziokwu: oburu na iju ndi mmadu gburugburu gi n'ogo, ya mere ndi mmadu na acho ubu ha maka ihe nile ma chee na ha apugh ime ihe obula banyere ya. Okwu ahụ bụ "nchekwube" na "positivism" karịsịa na-eme nke ọma (lee ebe a) ma ọ bụrụ na ị dị oke egwu, ị bụ 'ọjọọ' ma ọ bụ 'onye na - eche echiche ọjọọ'. Ezigbo mma: Onwe m anaghị echegbu onwe m banyere (dịka ọmụmaatụ) 40I banyere ihe mere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ụwa. Mgbe ụfọdụ ị na - ejide ihe, ma ọ bụghị ya, ọ dị mkpa ka ị nweta ego buru ibu, ka i wee nwee ike iji ya na - emefu ya.
Ma n'oge ụfọdụ, ìhè na-abịa na anyị na-atụ ụra ma na-ebuwanye ibu na steeti ndị uweojii site na obere nzọụkwụ. Maka m n'onwe m, nke a mere ka m kpebie ime ihe. Enwere m ike ịghara ịnọdụ n'oche ọrụ nchịkwa ahịa nke ọma ma lelee otú steeti si anọgide na-atụ anyị. Echere m na onye ọ bụla kwesịrị ime nhọrọ ahụ. N'ezie, na ihe ize ndụ nke ụlọ gị na ebe obibi gị ga-efu, ma ụlọ mkpọrọ ahụ nke na-ewu gị gburugburu dị nnọọ ize ndụ karịa amaghị ihe dị mkpirikpi na ị na-eri ugbu a. Gini mere m ji kwuo nke a? N'ihi na ọ bụ otú ahụ. A na-ewepụ nnwere onwe ka ukwuu, ọtụtụ iwu (gụnyere ndị nchịkọta na ndị nlekọta iwu ndị ahụ) ma anyị na-aga n'ihu ebe ndị uweojii na-eme ka ihe niile na onye ọ bụla nwee ike ịchọta ya, a ga-ata ya ahụhụ ma ọ bụrụ na ị nyere ndị ọzọ aka.
Ọ bụrụ na anyị emesị nwee ụlọ ọrụ na-enweghị ego na ihe ọ bụla ga-eme ka a chọpụta ya site na nchịkọta ahụ, ihe ahụ na-agaghị ekwe omume bụ kpamkpam ihe ị na-emefu. O nwebeghị ihe ga-eme ka ndị agadi nwee ike ileta ibe ha ma soro ya rie nri, n'ihi na onye na-enyocha nwere ike ịchọrọ onye na-ekwu na ha na-ebikọ ọnụ nakwa na a na-akwụ ụgwọ ezumike nká. Enweghi ike inye onye na-enweghị ebe obibi ụlọ n'ime ụlọ gị, n'ihi na ị na - ebikọ ọnụ ọnụ, a ga - ebipụkwa gị na ụlọ obibi gị, uru ma ọ bụ ndị isi ụtụ isi na - eche na ị na - ebikọ ọnụ na ihe ndị ọzọ. N'ọdịnihu dị nso, ọ bụrụ na DNA gị dị na nchekwa data ma smartphone gị ederede ọ bụla ị na - ewere (nke pedometer ahụ na - ewu ewu na ọtụtụ), ị na - atụle ahụ ike gị ma mara ebe ị nọ, onye nọ gị gburugburu , ebe ị na-echekwa na ị na-aga na ebe ego dijitalụ na-eme ka ị mara kpọmkwem ihe ị zụrụ ma ree, ị gaghị enwe ike ịnye ihe ọmụma na ogbe achịcha ma ọ bụ mkpọ mmiri ara ehi, n'ihi na mgbe ahụ, a na-akwụ gị ntaramahụhụ maka enyemaka nye onye kwesịrị ịkọ akụkọ na steeti.
A na-ewukwasị slumbering na usoro nkwụmụgwọ mmadụ, ebe ịchọrọ ịhapụ onwe gị pụọ n'aka ndị mmadụ nwere ike imetụta gị. Usoro a dị na China abanyeghị n'amaghị ama. Na Netherlands na ndị ọzọ nke EU, nke ahụ ga-adị ntakịrị. N'ebe a, a na-eme omume ahụ site na nyochaa na Webshops, Airbnb, Linkdin na ụdị mgbasa ozi ọ bụla. Otú ọ dị, ọ bụrụ na blockchain na-edebe ihe niile ị na-eme ma mee ka o sie ike (site na ngwongwo nke ngọngọ ahụ) na ị ga-arụ ọrụ ahụ niile, ihe niile ị na-eme kwa ụbọchị, ihe eji emefu ego na netwọk mmekọrịta gị nwere ike ịghọ nke a na-enweghị ike ime. Na ụwa nke 'ịntanetị nke ihe' na ntinye aka DNA na ihe ọ bụla i nwere ike ịzụta (site na anụ, nri, ngwaahịa ọcha na ezigbo ụlọ) ọ dịkwa nkenke ihe niile ịzụrụ, ire na iri. Ọ bụrụ na nkwụnye ụgwọ gị (n'ụdị mkpụrụ ego bitcoin dịka nchịkwa) nwere ike ịpụ na steeti site na "omume ọjọọ" ma ọ bụ na-emeso ndị nwere "àgwà ọjọọ" na ị ga - eche nche na onye ị na - emeso .
A ga-ebute ihe ndị a niile site na nkwụsị ụkwụ, ma eleghị anya ịmalite na ihe ndị dị elu ma ọ bụ ala ala na nlekọta ahụike na-adabere n'àgwà ọjọọ gị, ma n'ikpeazụ nakwa onye gị na ya na-akpakọrịta. A sị ka e kwuwe, ị na-emeso ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ na-aṅụ sịga nwere ike ịmalite ime ka omume gị dị mma. Ana m ese onyinyo nke ọdịnihu na ị ka nwere ike ịhapụ, ma nke a dị nso karịa ka ị na-eche na n'ihi na ụmụ mmadụ yiri anụ anụmanụ, anyị na-ahụkarị usoro mmasị site na mgbasa ozi ọha mmadụ, ma ọ bụ na ị ga-ejikọta site na Instagram , Snapchat na inye 'nyocha' maka ụdị ọrụ niile.
Ihe ikike ịnya ụgbọ ala bụ ihe atụ zuru oke nke usoro usoro ahụhụ a ga-arụ. Ma ndi mmadu ga-abia ihe kariri. Anyị na-aga n'ihu n'ụdị dị iche iche, na-agbakwunyekwuo usoro nkwụmụgwọ na nyocha ọ bụla. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-agụ nke a nwere ike itinye aka na usoro ndị na-akwado ihe a niile ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke ndị nchịkọta na ndị na-achịkwa iwu. Ndị ọzọ ndu ọgbọ ọhụrụ iji mezuo ọrụ ndị a op n'enyeghi ndu na nrube isi. Nwatakịrị a na-elekwasị anya bụ ma eleghị anya ihe kachasị atụ nke nduzi nke e weere ọha mmadụ. Onye ọ bụla nọ n'ahịrị ma anyị na-akụziri onwe anyị na ọ dị mma ịbịakwasị. Anyị na-elebara ibe anyị anya maka ịnọ n'iche na ndị agha niile na-eje ije na-ata ndị mmadụ ahụhụ ma ọ bụrụ na iwu agbajiri. Ndị ọzọ dị njikere ịnweta nnukwu ikpe ma ọ bụ ntaramahụhụ na nke a bụ otú igwe eji emezi nke ọma na-agba ọsọ ọsọ, n'ihi na onye ọ bụla chọrọ ịhapụ obere ụlọ nke ụmụ anụmanụ na akpụkpọ ụkwụ obere ogige. Anyị na-agwa ibe anyị 'ị na-enwe ọhụụ dị mma na nchekwa'.
I nwekwaghị oge ichere iji mee ihe. Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iche na gọọmentị ga-azọpụta gị. Ndi gọọmenti na ndi ochichi onye isi ochichi bu ihe kpatara uzo ulo mkporo. Ọ bụrụhaala na ị na-enyere aka ịnọgide na-enwe usoro ahụ, ị ​​bụ n'ezie ịkọwapụta na ihe nketa gị na ụmụ gị: ọnọdụ nchịkwa ndị uwe ojii dijitalụ. Ọ bụrụ na ụmụ gị jụọ gị ihe kpatara ya mere na ị gbalịghị ime ihe ọbụla banyere ya: gịnị bụ azịza gị? "Enweghị m ike ime ihe ọ bụla n'onwe m"? Ee, ị nwere ike ime ihe, mana ị na-atụ ụjọ na ị ga-atụfu ihe ụfọdụ ma kwenyesie ike n'echiche ụgha na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị tụgharịrị uche, kpee ekpere, mee omume yoga ma ọ bụ ihe eji eme mmụọ iji mee ka ị nwee obi amamikpe iji mee ka obi ruo gị ala. "Ee, ma ọ bụrụ na m gbalịa ịgbanwe ihe m onwe m, m ga-efunahụ ọrụ m, onye ọzọ ga-ebikwa ebe m nweghị ihe ga-agbanweỌ bụghị arụmụka. Nke a bụ ịrịọ mgbaghara maka onwe gị, na site n'iche ụdị àgwà ahụ ị na-enye aka n'ịhazi àgwà ahụ. Ekwughị banyere onye a sịrị na ọtụtụ ndị omempụ gbara gị gburugburu (lee nkọwa).
Oge ime ihe bụ ugbu a. Nke ahụ na-amalite site na ịmara ihe na-eme (nke bụ isi ihe mkpuchi n'elu) ma mesie nsogbu ahụ nsogbu. Maka nke a, ị ghaghị ịmalite ibi ndụ site na ọkwa ọhụrụ (lee ebe a). N'otu oge ahụ, ị ​​ga-etinye ya n'ọrụ, n'ihi na ma ọ bụghị na ị ga-asa ákwà (ime mmụọ) tupu ịwụ ọbara. Gụọ kwa isiokwu a kwenye ma chọpụta otú i nwere ike isi bụrụ ihe na ndụ gị. N'eziokwu, ị ga - ajụ onwe gị ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ụlọ gị na - ere ọkụ, ọkụ ahụ ewee: nọdụ ala ma chere ka ọkụ ghara ịdọrọ ike, gbalịa imenyụ ọkụ ma ọ bụ chere ruo mgbe oge gafere ga-agbapụ ụlọ ahụ? Oge ime ihe!
Ịkekọrịta isiokwu sitere na saịtị a yiri ka ọ bụ igbochi Facebook. Ya mere, ọ bụrụ na ịkekọrịta, ndị enyi gị ka na-ahụghị isiokwu ahụ na ndepụta ozi ha. Ugbu a abịaala ịgwa ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike na n'onwe ha ma ọ bụ na-edegara ha ozi na-edegara ha ozugbo. Nke ahụ nwere ike ịbụ mmalite mbụ iji nyere aka ibido mgbanwe ahụ. Ebe nrụọrụ weebụ a jupụtara isiokwu ndị na-eme ka ị mara ihe na-eme gburugburu gị. Mee ihe na ya ma mebie pasivity gị.
Tags: agba, echiche, agafe, ụra
2 July 2019 na 14: 12
Kwekọrịta kpamkpam na isiokwu ahụ, oge iji mee ihe na ya ..
2 July 2019 na 15: 49
Ezigbo nri .... ma ọtụtụ. Enweghi ike ịghọta ma ghọta ihe niile. N'agbanyeghị ugboro ole ị na-egosi ha. Ọ banyeghị. N'ihi otu n'ime ụzọ mbụ gị, nke ị kpọtụrụ aha Roald Boom. Echere m ụfọdụ n'ime ihe ndị ị na-etinye na vidio, ọ na-akọwa ya nke ọma na fim ya nke ọ na-ahụ ụmụ mmadụ niile dị ka NPC (ndị na-abụghị ndị na-akpọ egwu). Nke bụ n'ezie ihe dị ugbu a nke Plato's Allegory of the Cave.
2 July 2019 na 17: 04
Ị pụtara na ị gụrụ isiokwu a:
2 July 2019 na 17: 44
Enweela m n'ezie ịgụ nke ahụ .... M chere na iche echiche abụghị naanị ihe kpatara ya. Karịa ikike nke onye Dutch ma ọ bụ mba ọ bụla. I nweghị ike ikwenye ha na arụmụka ọ bụla, ọbịakwute wdg. Ìhè ahụ na-aga, ma ọ dịghị onye nọ n'ụlọ.
2 July 2019 na 22: 40
Ọ bụrụ na, dị ka onye nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ, ị na-ekwu okwu banyere nkwekọrịta nke
onye ohuru ohuru n'anya gi mgbe i mara na i gabiga ókè nile nke ọmiko. (a na - ejikarị nzapu ma na nke a, ọ dịghị enwe ọmịiko)
Ma ọ bụ na ị maara na ọ gaghị enwe nguzogide n'ihi na enweghị ndị ị hụrụ n'anya, ndị ga-asị? Anyị na-amaghị
Enwere ebe a magburu onwe ya maka ndị na-ebipụta akwụkwọ mgbe a na-enwe olulu mmiri? Chere !!! Gini mere enweghi ogbako ogbako na mbu banyere nchọta nke onye ahu furu efu, ebe ndi oru nta akuko choro na o bu ihe ojoo. Ndị mmadụ 17million na-aga n'ihu na akụkọ ahụ dum ma nwee ikike zuru oke iji nweta nghọta, nkọwa sitere na mgbasa ozi / ike / ndị uweojii.
Gịnị mere onye isi ụgbọ mmiri ahụ anaghị anụ na nnọkọ ogbako. kedu ihe mere na enweghi ogbako ogbako mgbe niile ma ọ bụrụ na ị lebachara anya na mgbasa ozi niile (ịkpụ & pasta forums). Gịnị kpatara aha ụgbọ / ụgbọ mmiri amaghị? Gini mere enwereghi ihe oyiyi nke ndi nche / ndi uweojii ma obu marrechaussee mgbe ha na-agafe? Ntak emi Peter R de Vries ọkọdọhọ ke Anja ekeme ndiwot idem. Ọ bụrụ na Anja na-arịa ọrịa na-adịghị mma, gịnị mere ndị mgbasaozi ji ede banyere ya?
Gịnị kpatara ọha na eze ji nwee obi abụọ gbasara otu onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ na Blauwen Bock mgbe nzukọ ikpeazụ ahụ gasịrị, a mara ọkwa na ọ bụ ihe ọṅụṅụ ezinụlọ ma "onye" nke ezinụlọ ahụ ka kwuru, sị: wepụ tagzi.
Ya mere, e nwere ọtụtụ ajụjụ ndị na-eme ka esemokwu ahụ nile dị ka akụkọ na-abụghị eziokwu, ebee ka ndị nta akụkọ na-abịa na foto nke ụgbọ mmiri ahụ na ndị ọrụ ahụ Anja chọtara.
Ma ọ bụ na enweghi ndi oru nta akuko na enwere ihe niile igbue ma kpochapu? Katwijkers egbula ịjụ ajụjụ ọ bụla.
Naanị ọnụ na - ekwuchitere ndị uweojii (Dick Goijert) na - ekwu okwu na igwe mmadụ 17, anyị aghaghị ikwere na dịka pastọ
Lee akụkọ banyere Dick Goijert site na ndị uweojii
3 July 2019 na 08: 58
Ọ bụ n'ezie akụkọ dị ịtụnanya, naanị mgbasa ozi mgbasa ozi na-enyo enyo. E nwere ihe ndị na-efu efu nke m chere na ọ bụ eziokwu, mana mgbasa ozi na-adịkarị ụkọ, mgbe ụfọdụ ọ bụ akwụkwọ akụkọ mpaghara na nke ahụ. Echere m na akwụkwọ akụkọ na-ahọrọ nke ọma na ịkọpụta ozi ọma ma ọ bụrụ na nke a na-akawanye anya karịa mgbe ahụ ọ bụ enyo ma ọ bụ ma eleghị anya akụkọ na-adịghị ahụkebe.
3 July 2019 na 08: 49
Na ihe nkiri onye na-eme ihe nkiri na 1993 ị pụrụ ịhụ nke ọma ebe anyị na-aga, ogologo oge gara aga, ahụrụ m fim ahụ ma kwuo na ụwa na-aga ebe ahụ.
Ugbu a na 2019, anyị na-ahụ na nke a bụ eziokwu.
Iwu na-ese anwụrụ a bụ ezigbo ihe atụ, mgbe ahụ, ịkwado nri ndị anaghị eri anụ. A ga-ewepụ mmanya na-aba n'anya n'oge na-adịghị anya. Kedu ka anyị si dị site na elekere elezigharị ị na-ahụ na fim ahụ nke 3D na-ebipụta n'ihi ụda ụtụtụ?
Na ihe nkiri ahụ, ị ​​hụkwara otú e si kpebie gị maka ịṅụ iyi ma ọ bụ nkọcha, nke si na mgbidi gafee. Ugbu a, usoro dị otú ahụ bụ ọrụ na China na kama nke onye nbipute nke ọma ka ezitere site na SMS.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ nnukwu nchegbu maka ọtụtụ ndị na-abaghị uru, ị maara ndị ezinụlọ ahụ? ezigbo ọrụ, ụlọ dị oke ọnụ, anaghị aṅụ sịga, aṅụla mmanya ma rie nri onye anaghị eri anụ. Ụmụaka na-agba ọgwụ megide ihe ọ bụla na ihe ọ bụla, ya mere ihe nhụjuanya ọ bụla na ihe ọ bụla.
Ndị mgbasa ozi na-eme nke ọma.
O yikwara na ndị mmadụ agaghịzi ekwe ka ha nwee obi ụtọ n'ọdịnihu, ma e wezụga ma eleghị anya site n'eziokwu.
3 July 2019 na 10: 06
Madurodam, ụwa ọhụrụ obi ike. Ọ dịghị mmadụ bi ebe a ma ọ bụ robots. Ọbụna "mmetụta" ha dị mma. Na inwe ike iche echiche banyere nke ahụ
ndị na-arụ ọrụ ugbo ala abụghị kpọmkwem n'ihi ọnọdụ ahụ.
Ihe niile gravy dị. Ihe niile dị adịgboroja, ihe niile na-eduzi ebe a.
Nzube nke a bụ ike zuru oke, ike zuru oke
na na mmasị nke ọchịchị ụmụ okorobịa nke edemede ahụ. Ụmụ okorobịa ahụ na-eme atụmatụ ịhapụ inye ike ahụ ọzọ, ọbụnadị site n'ụzọ nkịtị.
Oge ga-abịa ọbụna mgbe a na-egbochi ata igbochi ata, ịghọ ata. N'ihi na ụmụ nwoke nke edemede ahihia bụ ihe nnọchianya nke nnupụisi, nnupụisi megide usoro nke ụmụ nwoke nke edemede.
Siep dere, sị:
4 July 2019 na 20: 02
Ugbu a ka m maara banyere nchịkọta ndị na-egbochi m ime ihe. Nnukwu ma eleghị anya ọ ga-abụ na Martin .... Ma mgbe m gụrụ mmeghachi omume, ma ọ dịkarịa ala aha, enwere ndị na-adịghị anwa anwa anwa ịzaghachi n'èzí, anaghịkwa m ekwu na dị ka nkọcha, abụ m otu n'ime ha!
Ị pụghị ịgwa m ihe kwesịrị ime tupu m eme ihe ...
5 July 2019 na 11: 34
Naanị chee na ọrụ ụmụ okorobịa si na edemede ahụ maara onye Siep na akwụkwọ ndị ọzọ dị na saịtị a.
Eziokwu ahụ bụ na enwere ndị nwere ike ịza ajụjụ ndị nwere ike ịtụ egwu ikwu okwu dị oke mkpa na saịtị Martin pụtara na ndị a na-aza ajụjụ maara nke ọma na anyị bi n'ọchịchị aka, ọchịchị aka ike, ọchịchị aka ike.
Ihe mere ị ga - eji dị egwu!
5 July 2019 na 18: 49
Maka m, m na-echegbu onwe m banyere ebe obibi m, na-eche na ọ dịghị mmadụ nwere agbakọta abụọ karịa 'ọrụ'. Na ọ bụ ezie na ha maara onye na-abịa ịhụ ma zaa ebe a, ọ bụ (maka ugbu a) amaghi maka gburugburu ebe obibi gị.
" Kpochapụ onye nlekọta kacha mma maka mkpochapu ego na ịchịkwa ndị mmadụ niile
Kedu ka ndị mmadụ nwere ike isi kwuo banyere 'mmata' na n'otu oge ahụ iji nyere aka na-elekọta usoro ahụ? »
Nleta nile: 15.866.690